Isiokwu njikarịcha maka Search
Etu esi eji Keywords rụọ ọrụ nke ọma maka SEO na ndị ọzọ
Tuesday, October 17, 2017 Tuesday, October 17, 2017 Douglas Karr
Search engines chọta isiokwu dị iche iche dị iche iche nke ibe ma jiri ha chọpụta ma peeji a ga-etinyere ya na nsonaazụ ụfọdụ. Ojiji ojiji nke isiokwu ga-eme ka edepụta peeji gị maka ọchụchọ a kapịrị ọnụ mana adịghị ntinye ego ma ọ bụ ọkwa n'ime ọchụchọ ahụ. E nwekwara ụfọdụ nkịtị isiokwu emehie izere.
Ibe obula kwesiri ileba anya na mkpokọta okwu. N'uche m, ị gaghị enwe peeji nke na-elekwasị anya karịa 3 gaa na 5 ma ndị ahụ kwesịrị inwe njikọta. Ya mere 'nzipu ozi nzipu ozi' na 'ahia ahia' nwere njikọta na ibe ha-maara ihe ma enwere ike iji ya na ibe gị na ibe.
Ibe akwukwo gi kwesiri ilekwasi anya na ihe di uku nke na eme ka mgbanwe, ghara itinye uche na ya na-eri nri isiokwu na ọdịnaya ahụ niile. Ihe okike eji eme ihe bu ihe kachasi mkpa - nke mere ka igwe nyocha choo ohia ma ndi nleta adighi-ahu ha. Ọdịnaya na-agbanwe ntụgharị (ahịa) - yabụ dee nke ọma!
Ebe ichoputa Keywords
Naanị ngwa ọrụ m ji ọzọ nnyocha nyocha na- Semrush na BuzzSumo. BuzzSumo na-enye nghọta na ewu ewu ọdịnaya yana Semrush na-enye nghọta na nchịkọta ọdịnaya… ha abụọ abụghị otu. Ewepu plethora nke nyocha na ngwa ọrụ, Semrush naanị na-eme ihe ịrịba ọrụ na-achọpụta ihe ndị kasị mkpa Keywords maka azụmahịa gị. Ndị a bụ ụzọ ole na ole m si eji ngwa ọrụ a:
Ngalaba Keywords - M na-agba ọsọ na akụkọ banyere onye ahịa iji chọpụta isiokwu ha nwere ike ịba ọkwa ma chọpụta ma enwere usoro dịka mgbanwe ọdịnaya na nkwalite m nwere ike idenye nke ga-eme ka ogo ha dị elu.
Keywords njikọ - Mgbe m na-achọta Keywords na m chọrọ nwaa, M na-agba ọsọ metụtara isiokwu akụkọ mata ndị ọzọ n'ịgwa nke mkpa Keywords na m ga-enwe ike garner mma ogo on.
Nyocha gbasara oghere - Semrush nwere ezigbo njiri mara ebe ị nwere ike iji ọtụtụ ngalaba wee chọpụta ebe gị na ngalaba ndị ọzọ na-asọ mpi. Anyị na-amatakarị isiokwu ndị asọmpi ndị ahịa anyị nwere ogo na nke anyị na-achụbeghị.
Etu esi eji Keywords rụọ ọrụ nke ọma na saịtị gị maka SEO
domain - ọ bụrụ na ngalaba aha gị nwere isiokwu, ọ mara mma. Ọ bụrụ na ọ bụghị, nke ahụ dịkwa mma. Jide n'aka na ị debanyere ngalaba ahụ maka afọ 10 ka Google mata na ọ bụghị saịtị spam ma nwee ike ịba uru. Ndenye aha ndebanye aha bụ akụkọ ifo SEO. Agbanyeghị, ngalaba na - eto eto ga - enwe ikike karịa nke enwere ike iji rụọ ọrụ n'oge gara aga maka okwu ndị yiri ya. Tupu ị chọọ ngalaba ọhụrụ, lelee ụfọdụ auctions na ngalaba ndị ọzọ dị mkpa… ị nwere ike ịmalite mmalite ma ọ bụrụ na ị na-amalite!
Home Pụrụ Iche Tag - Gbalịsie ike na mkpado aha ụlọ gị nwere obere okwu ị ga - etinye ma debe ha n’ihu ụlọ ọrụ gị.
Kpido aha - peeji nke obula nwere onwe ya inwe isiokwu ndi ọdịnaya nke ibe ahu lekwasịrị anya.
Meta Tags - a na-eleghara mkpado isiokwu ahụ anya site na engines ọchụchọ na isiokwu ndị ejiri ya mee ihe na nkọwa gị. Agbanyeghị, mgbe mmadụ na-achọ otu mkpụrụokwu, ọ na-aka ike na peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ ka onye ọrụ ọchụchọ wee nwee ike pịa nsonaazụ gị.
Ntughari Tags - na HTML, enwere isiokwu na isiokwu nta. Ndị a bụ kpọmkwem , , na mkpado n'usoro dị mkpa. Nchọgharị ọchụchọ na-a attentiona ntị na mkpado ndị a ma ọ dị mkpa ka ị toaa ntị na ha yana ị mepụtara ibe ma jiri isiokwu. N'ihi na blog posts, ahu nagide Keywords gị blog post utu aha. Zere iji , , ma ọ bụ na mkpado gị sidebar.
Nkwuwa okwu na Akwụkwọ Ozi - obi ike ma ọ bụ iticicize gị Keywords na peeji nke ka ha pụta ìhè.
Image Alt na Nkọwa - mgbe ị na-ahu nagide ihe oyiyi (na-atụ aro) n'ime gị na saịtị peeji ma ọ bụ posts, ijide n'aka na-ahu nagide Keywords n'ụzọ dị irè na ihe oyiyi alt ma ọ bụ nkọwa na mkpado.
Usoro njikwa ọdịnaya gị kwesịrị ikwe ka nke a.
Njikọ Esịtidem - ọ bụrụ na ị kpọtụrụ aha ndị ọzọ ma ọ bụ ibe ndị ọzọ n'ime saịtị gị, jide n'aka na ị na-eji mkpụrụokwu dị irè na ederede arịlịka nke njikọ na ọdịnaya ahụ na aha aha mkpado arịlịka.
Keywords ndị ọzọ
Zere iji okwu ọnụọgụ dịka 'gụkwuo' ma ọ bụ 'pịa ebe a'.
Okwu mbu nke ọdịnaya - okwu mbu na ibe gi ma obu post gi gere gunyere isi okwu di nkpa banyere nke di n’ime peeji ahu.
N'elu peeji - Nchọgharị ọchụchọ na-elele ibe ma nyochaa ọdịnaya site na elu ruo na ala, elu nke ibe ahụ bụ ọdịnaya kachasị mkpa na ala nke ibe ahụ adịghị mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere nhazi columnar, chọpụta ụlọ ọrụ gị nke mepụtara isiokwu gị ma hụ na ogidi dị ala na HTML gị karịa ahụ nke ọdịnaya gị (ọtụtụ isiokwu tinye sidebar na mbụ!).
Ugboro ugboro ojiji - n'ime ọdịnaya gị (nke a makwaara dị ka isiokwu njupụta), Ọ dị mkpa iji Keywords ndammana n'ime ọdịnaya gị. Igwe ọchụchọ na-enwetawanye ọkaibe na ịchọta okwu dị mkpa, yabụ gị ekwesighi ikwughachi otu akpaokwu. Na-arụ ọrụ mgbe niile iji hụ na ọdịnaya gị bụ ihe okike na ihe siri ike. Ọ bụ ezie na ọdịnaya nwere ike ime ka ịchọta gị, ọ gaghị ere gị!
Nke a bụ otu ihe ọzọ dee… Keywords adịghị ga-dakọtara. Okwu mmekorita na okwu ndi ozo dika ihe di nkpa ma nwekwaa ike inweta obi gi n’ime otutu nchikota ichota ma oburu na i jiri ha. N'ihe atụ nke post a, m na-eji okwu dịka isiokwu ojiji, mana m na-ejikwa okwu dika SEO, isiokwu njupụta, content, aha mkpado… Okwu niile metụtara isiokwu ahụ mana ọ nwere ike ime ka ịchọta ọkwa a maka njikọta ndị ọzọ.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ndị ọrụ nke engines ọchụchọ na-edezi mkpokọta ogologo ogologo - gụnyere ajụjụ na ahịrịokwu ndị ọzọ iji belata nsonaazụ. Yabụ isiokwu abụghị naanị otu okwu 1 ma ọ bụ abụọ, ọ nwere ike bụrụ ahịrịokwu dum! Anyị achọpụtakwala na ogologo oge njikọta ahụ, egwuregwu ahụ ka mma, ọ ga-adịrị ndị ahịa ahụ mkpa - ọ ga-abụ na onye ọbịa ahụ ga-agbanwe.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta njikọ mpụga na isiokwu iji laghachi na saịtị gị, ọbụlagodi! Ederede a bụ naanị maka ojiji isiokwu saịtị, ọ bụ ezie.
Keywords na-ejide oke mkpa maka azụmaahịa nke weebụsaịtị ha bụ ndọtị dị mkpa nke ọrụ ha. Mgbe ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, weebụsaịtị wepụtara nke ọma nwere ike ibute nsonaazụ ọchụchọ ka mma wee nwekwuo okporo ụzọ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Na ngwụcha, ọ na - enyere azụmaahịa na - adọta atụmanya nwere ohere dị elu nke ịtụgharị n'ime ndị ahịa na - akwụ ụgwọ. Healthy Business Nrụpụta
Nke a bụ ihe infographic si Healthy Business Builder, Kedu ihe kpatara Keywords ji dị mkpa maka azụmaahịa gị n'ịntanetị:
Ngosipụta: M na-eji njikọ njikọ m maka Semrush ke ibuotikọ emi.
Tags: ederede ozoobi ikeisiokwu ngalabamesie ikeọdịiche nyochaisi na mkpadon'ụlọ peejioyiyi altitalicisiokwu mpinnyocha nyochaisiokwu ojijiKeywordsmeta KeywordsnjikarịchasemrushAStrongaha mkpado
Wezọ Anyị Si Arụ Ọrụ Email Na-agbanwe Agbanwe
Nov 9, 2009 na 10:18 PM
Nke a bụ nnukwu ọdịnaya Douglas. Ọtụtụ saịtị, ọtụtụ mgbanwe, na ọtụtụ nsụgharị si ebe ahụ na ọ na-agbagwoju anya nye onye ọ bụla na-amalite ịmụ banyere SEO arena. Ma ị gara ozugbo ịga ihe dị mkpa na ihe na-abụghị; ihe ụfọdụ na-akpọ "ruo n'ókè"! Kpamkpam bara uru oke na peep m. –Paul
Nov 10, 2009 na 2:46 AM
Nnweta dị egwu, PJ! Anụrụ m 'ụda olu' ya mere m kpebiri itinye ya na post. Echere m na ọ naghị emerụ ihe ọ bụla (na mpụga obere akpa gị)! Daalụ maka iwepụta oge na biputere nke a!
Patric Welch na-bụ mmadu
Nov 11, 2009 na 2:29 AM
Ndi # 1 bu eziokwu? Anụla m echiche dị iche iche banyere ya. Enwere m ngalaba m niile na mmegharị afọ 1. Ana m achọgharị onwe m na ngalaba azụmaahịa m site na ịghara ịgbatị ya ruo afọ 10?
Nov 11, 2009 na 2:55 AM
PJ mere nnyocha dị ukwuu ma chọpụta ụfọdụ isiokwu sitere na Google na-agbagha nke a. Ya mere - Echere m na agaghị m echegbu onwe m banyere ya. M ka na-eme ya, ọ bụ ezie na… Echere m na ọ bụ ezigbo omume ma asị m na ọ na-adị ha ka ọ na-agwụ mgbe enweghị ego!
Mee 9, 2013 na 5: 18 PM
Daalụ maka isiokwu ahụ. Ọbụna nke a edere ya na 3.5 afọ gara aga ọ ka bara uru ma bara ezigbo uru.
Mee 9, 2013 na 8: 22 PM
Ọ ka dị mkpa, mana enwere m ike itinye obere mgbado anya na ikwughachi ya na itinyekwu ọdịnaya obi. Google ga - achoputa ebe o kwesiri!
Aug 29, 2013 na 7: 32 AM
Aug 20, 2015 na 5: 29 AM
Edemede dị egwu, a na m atụ anya na ihe dịkwa ka ọ dị n’iru afọ 3-4.
Aug 20, 2015 na 10: 15 AM
Maka ọtụtụ akụkụ, ekwenyere m na ọ ka dị mkpa. Agbanyeghị, m ga-agba ume ide maka onye na - agụ ya na B NOTGH paying ị payinga ntị na igwe ọrụ SEO kachasị mma. Ọ bụ ezie na atụmatụ ndị a nwere ike inyere gị aka depụta aha ya nke ọma, ogo ga-adabere na ewu ewu nke ọdịnaya ahụ. Rụ ọrụ iji hụ na ị nwere nnukwu, ọdịnaya bara ụba dị mkpa karịa ntinye isiokwu na 2015. Nakwa, Google na-amata okwu mmekorita oge taa dị mma karịa ka ọ dị na mbụ.
Jul 19, 2017 na 8: 04 AM
Keywords na-arụ ọrụ dị mkpa na SEO. Ọtụtụ mmadụ anaghị etolite nke ọma na igwe nchọta ihe, n'ihi nyocha isiokwu na itinye ya na-ezighi ezi. Agbanyeghị, ekele maka post gị, ọbụnadị ndị mbido nwere ike ịmata nka nke Keyword Optimization. Akwa isiokwu. N'ezie na-enye aka. Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta!